भोलि कार्तिक १३ गते शनिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / Uncategorized / भोलि कार्तिक १३ गते शनिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
भोलि कार्तिक १३ गते शनिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin October 29, 2021 Uncategorized, जीवनशैली Leaveacomment 358 Views
परिवारको सदस्यसँग मनमुटावको कारण मनमा ग्लानि रहनेछ। छातीमा पीडा वा अन्य कुनै विकारको कारण चिन्ताको अनुभूति हुनेछ। अनावश्यक आर्थिक खर्चबाट बच्नुहोला । मन अझै चिन्तित रहन सक्छ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ।
हरेक काममा सफलता मिल्नेछ । सामाजिक दृष्टिकोणबाट सम्मान मिल्नेछ । तर मध्यान्नपछि झगडाको वातावरण बन्नेछ । तपाई प्रफुल्लित रहनुहुन्छ। मानहानीबाट बच्नुहोला।
बिहानको समय मन क्रोधित रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा चिन्ताको अनुभव गर्नुहुनेछ। व्यर्थ धन खर्च नगर्नुहोला । विद्यार्थीले अपेक्षित नतिजा पाउने छैनन् । तर मध्याह्नपछि साथीभाइ र प्रियजनसँगको भेटले मन प्रसन्न रहनेछ। आर्थिक लाभ पनि हुनेछ ।
तपाईको दिन सुखमय रहनेछ। तपाई अधिक संवेदनशील रहनुहुन्छ। शारीरिक र मानसिक आनन्द राम्रो रहनेछ। प्रियजन र साथीभाइसँग भेटघाट हुनेछ। तपाईंको मनोवृत्तिमा नकारात्मक परिवर्तन एवम निराशाजनक विचार आउन सक्छ।
बोलि र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। प्रियजनसँग दुखी रहनुहुन्छ। खर्च सोचेभन्दा बढी हुनेछ । मानसिक भ्रमलाई त्याग्नुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। मध्यांन्नपछि तपाईको लागि समय अनुकुल रहनेछ। नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ ।
विभिन्न क्षेत्रबाट लाभ होला। व्यापार व्यावसायमा लाभ हुनेछ । सहकर्मीको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। साथीभाइको लागि भएको खर्च लाभदायक हुनेछ । मध्यान्नपछि तपाईको मनमा अनिश्चितता रहनेछ। आफन्तप्रति भेदभावको घटना हुन सक्छ।
तपाईको लागि दिन निकै शुभ छ। धार्मिक कार्य तथा दिव्य दृष्टिबाट लाभ मिल्नेछ । विभिन्न क्षेत्रबाट लाभ होला। उच्च अधिकारीबाट हौसला मिल्नेछ । पदोन्नतिको सम्भावना छ । प्रियजन र साथीभाइसँग भेटघाट हुनेछ। मनमोहक पर्यटकीय स्थलको भ्रमण हुनेछ ।
तपाईको लागि दिन निकै शुभ छ। धार्मिक यात्रा वा दैवी दर्शनको लाभ मिल्नेछ। विभिन्न क्षेत्रबाट लाभ मिल्ला। वैदेशिक यात्राको लागि परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। उच्च अधिकारी तपाईंको कामबाट प्रसन्न हुनेछन्। प्रियजन र साथीभाइसँग भेटघाट हुनेछ।
कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला। मनमा निराशा र अपराधको भावना उत्पन्न हुनेछ। क्रोधमा धैर्यता राख्नुहोला। परिवारको सदस्यसँग विवाद नगर्नुहोला । शारीरिक र मानसिक स्थितिमा सुधार आउन सक्ला।
तपाईको दिन आफन्त तथा आफन्तजनसँग खुसीसाथ बित्नेछ। तपाईंले मनोरञ्जन प्रवृतिको पूर्ण आनन्द लिनुहुनेछ। सहभागिता लाभदायक रहनेछ। व्यापारको क्षेत्रमा फाइदा हुनेछ। तर मध्यान्नपछि समय अनुकुल छ। शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुनेछ।
आजको दिन निकै शुभ रहला। व्यापार – व्यवसाय गर्नेहरुको लागि दिन शुभ रहनेछ । शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ रहनुहुनेछ । मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा व्यस्त रहनुहुनेछ ।
मनमा अशान्ति र आक्रोश कायम रहनेछ। कुनै कारणले आकस्मिक धन खर्च हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछैन। घरमा आनन्द र शान्तिको वातावरण रहनेछ। काममा सफलता मिल्नेछ । घरपरिवारको सदस्यसँग खुसीसाथ समय बित्नेछ।
Previous कलेज ड्रेस मै किशोरीहरुले ७२ घण्टे चक्की किनेर चकलेट जसरी खान्छन्, बाँझोपना होइन ज्या नै जा न सक्ने डाक्टरको यस्तो चे तावनी
Next फेरि बढ्यो पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य